ပြောပေးကြပါ။။။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြောပေးကြပါ။။။။
Posted by ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး on Jul 27, 2012 in Copy/Paste | 31 comments
နောက်ပြီး မိုက်လေး ရေးထားသမျှ…
မန်းဂေဇက် မှ အရီးခင်လတ် ဦးပေ ကိုပေါက်…
တခြားသူတွေရောပေါ့ မိုက်လေး ကိုကူညီပေးပါ…
ဂေဇက် အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ပျော်ခဲ့ပါတယ် စာတွေလည်း ရေးချင်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်…
တစ်ချိန်က မန်းဂေဇက် မှရွာသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့…
မန့်သမျှတွေမှာဗျာ ရိုင်းတာ တစ်ခုမှမပါပါဘူး…
ဆရာ ဘုဂလန့်် ။ အောက်ကဟာကြောင့် ထင်တယ်နော် ။
ချော့လိုက်ပါဗျာ ။ ရွာသူား အချင်းချင်းပဲ ။
” စိတ်ပျက်နေဒါ တော်တော်ကြာဘီပေါ့ဗျာ
အဲ့လိုပေါကြောင်ကြောင် ဂေါက်တောက်တောက် စကားလုံးတွေကို မခံစားတတ်ဘူး
လူ ဆိုဒါ သရီးရှဲဒိုးနားလည်ရဒယ် (သရီးရှဲဒိုး = အရိပ်သုံးပါး) မသိမှာစိုးလို့ ဘာသာပြန်ပေးထားဒယ်
ဝက်သားဒုတ်ထိုးသည်လို အထူအပါးနားမလည်ရင် အရှုံးပေါ်တတ်တယ်၊
ဒီနောက်ပိုင်း မျက်စိနောက်တဲ့စာရင်းထဲမှာ ဒင်းလည်းပါဒယ်။
Name နဲ့လိုက်အောင် ဘုဂလန့်မန့်ခဲ့ဒယ် ဘာဖြစ်လဲ ”
ပျော်ရွှင်ပါစေ မန်းဂေဇက်မှ သူငယ်ချင်းတွေ “
မန့် ..ပေးတာလည်း ဘုဂလန့် ဆိုရင်တော့…..
မန်းဂေဇက် ရဲ့ ရွာသူတစ်ဦးကလည်း…
ဘန့် ဂလုဆိုတဲ့…ဘုဂလန့် လေးကို….
မန့် ..ပေးတာလည်း ဘုဂလန့် ဆိုရင်တော့….. အဲ့ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဆက်ပြောဘာ
ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ လာမလုပ်နဲ့ ကိုယ့်လူ
ရွာထဲအခုမှဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် အားလုံးကို သိဘီးသား
တိန် ကျောင်းတော်ကရန်စ ဖြစ်ပေတာပ၊ ဘုဘုရေ ကျေအေးပါတော့ ၊
ခပ်မိုက်မိုက်ကောင်မလေး ဆိုတော့ မိန်းခလေးဘဲ ဖြစ်မှာယူဆပြီး
စာဆိုရင် မိုက်လေး ဘယ်လိုရေးရတော့မလဲ…
မဟုတ်ရင် အကောင့်က ဝင်ဖြစ်နေဦးမယ်
ခက်တာက မိုက်လေး အတွက် နေရာမရှိဘူးဗျ
ဂေဇက်တံခါး အများအတွက်သာ အမြဲဖွင့်ထားပါတယ်….
မှတ်ချက် ။ ။ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ဝင်ခွင့် ထွက်ခွင့်ရှိသည်၊ ခွင့်တောင်းရန်မလို၊
မိုက်မိုက်ရေ ဘာကြောင့်ထွက်ချင်လဲဆိုတာ သေချာမသိပေမယ့်
ဒီစာနဲ့ပက်သက်လို့ ဝေဖန်မှုအမျိုးမျိုးကို ခံကြရမှာပါ
တစ်ခါတစ်လေ နားလည်မှုမတူတဲ့အခါ အတွေးတစ်မျိုးစီနဲ့
ပြောကြတာတွေလဲရှိတာပေါ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေနေ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်
ဘဝဆိုတာ အခက်အခဲလေးတွေတော့ ရှိတတ်စမြဲမို့
စိတ်ဓါတ်မကျပဲ ရွာထဲမှာ ပျော်ပျော်နေပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်
မထိတ်သာ မလန့်သာ ရှိလိုက်တာ …. ။
ဘယ်နှယ့်ထွက်မှာတုန်း .. အလကားနေရင်း ထိုင်ရင်း ….. ။
ကဗျာတွေရေးသလို ပို့စ်လည်းရေးဦးမယ်ဆိုလို့ …. စောင့်နေတာလေ ………. ။
အစ်မကတော့ .. ထွက်တာ မထွက်တာ .. ညီမလေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မို့ တစ်ဆုံတစ်ရာ ထင်မြင်ချက်မပေးချင်ပါဘူးနော် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနေရာလေးက အစ်မတို့လို အထစ်အထစ်နဲ့ စာရေးသူတွေအတွက် အစမ်းလေ့ကျင့်ပေးရာနေရာလေးပေါ့ ၊ ဒီနေရာလေးကို အရင်းပြုပြီး လေလှိုင်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေအများကြီး အပြင်မှာဆုံခဲ့ရသလို ၊ သုတရသ စာပေတွေလည်း အများကြီး ဖတ်ခွင့် လေ့လာခွင့် ၊ ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ပါတယ် …. ။ ဒီတော့ စဉ်းစားပေါ့နော် …….. ဘယ်လို အကြောင်းပြချက်ကြောင့် ထွက်သင့်သလဲ ၊ မထွက်သင့်ဘူးလဲ ဆိုတာ မျိုးပါ … ။ စာရေးသူတိုင်းက ဝေဖန်ခံရတတ်ပါတယ် …ကိုယ့်စာတပုဒ်သူများရှေ့ချပြလျှင် ကောင်းတဲ့ မျက်စိနဲ့ ကြည့်မယ့်လူရှိသလို ဝေဖန်မယ့်မျက်စိနဲ့ ကြည့်တဲ့ လူလည်း ရှိတယ် … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က …. ဆိုးတာပြောပြော ကောင်းတာပြောပြော မတုန်လှုပ်တဲ့ စိတ်ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ် …….. ။ ချင့်ချိန် စဉ်းစားနိုင်ပါစေနော် ။
နာမည်ပြောင်းလိုက် ပီးရင် ဟိဟိ (အဲ့ဒါမှ မှတ်မိရင်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး)
ဘာကိုထွက်မှာလဲ မိုက်လေးရဲ့ ….. ရေးသာရေး သူများမကြိုက်လည်း ကိုယ့်အသားမထိဘူး …. ဘာမှတွေး ပူမနေနဲ့ ဒီလူမကြိုက်လည်း ဟိုလူရှိတယ် မပူနဲ့သိလား …….အမ၀မ်းနည်းနေတယ်နော် အမကိုဝမ်းနည်းအောင် ထပ်မလုပ်နဲ့ …….
သြော် ဘာများလဲလို့ကွယ်။ account ကိုအပြီးဖျက်ချင်တာနဲ့တူတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သဂျီး နဲ့ သဂျီးနီးပါး အာဏာရထားတဲ့သူတွေကို အကူအညီတောင်းဗျာ။ သဂျီးကတော့ ခုနေအလုပ်များနေမယ်ထင်တယ်။
ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဒိရွာလေးကို ခုမှရောက်ရုံ ရှိသေးတယ် ခင်တောင်မခင်ရသေးဘူး
ထွက်မသွားပါနဲ့ မိုက်မိုက်ရယ်၊အားလုံးကလဲ အမိုက်မဲလေးမို့ ဗွေမယူကြပါနဲ့ဗျာစ
မိုက်လေးရေ တခါတရံဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောမို့ ပါ။ကျနော်လဲ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မိုက်ကလေး ကို မထွက်ပါနဲ့ လို့ အရီး တောင်းပန်ပါတယ်။
သမီး နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ရွာထဲမှာ ဘာပြသနာ မှ အရီးသတိမထားမိပါလား။
စာရေး ဖို့ စိတ် မပါတဲ့ အချိန် မရေး နဲ့ ဝင်ဘဲ ဖတ်ရုံဖတ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ ပျော်စရာတွေ မျှဝေချင်လာရင်၊ စိတ်ညစ်လို့ ရင်ဖွင့် ချင်လာတဲ့ ရှိလာရင် အရီး တို့ အားလုံး သမီး နဲ့ အတူ ဝင်ပြီး ခံစားပေးကြမှာပေါ့။
တကယ်တော့ ဂေဇက်ရွာ ကို အမုန်းတွေ နဲ့ စစ်တလင်းလို မဖြစ်စေချင်ကြပါဘူး။
အချင်းချင်း မတူတဲ့ စိတ်ကူးတွေ ဖလှယ်ရင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေသွားချင်ကြသူ တွေများမှာပါ။
ဒီတော့ မထွက် နဲ့ နော်။
နောက်တစ်ခါ ကျရင် မုန့်အတူတူ သွားကြမယ်။ :-)
ဒီမှာက အနီလဲ ပေးချင်ပေးမယ် လက်မလဲဇောက်ထိုးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် အဆဲလဲခံရနိုင်တယ်ပေါ့  ထားပါ
ဒါတွေကို ဂရုစိုက်နေရင် လူ့ ဘ၀တိုတိုလေး ဘယ်လိုသတ္တိနဲ့  ဖြတ်သန်းရမလဲ ။
ဆိုးတာတွေတွေ့ ရင်လည်း လေ့ကျင့် ပေးနေတယ်လို့ မှတ်လိုက် ……
ကောင်းတာတွေရရင်လည်း လက်ဆောင်ပေးတယ်မှတ်လိုက် ……..
ဆိုတော့ စဉ်းစားပေါ့ 
ခံစားမှုဆိုတာတွေက ခဏပါဘဲ …………….။
လောကဓံဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခံရတာ လောကဓံတစ်ခုသာ ဖြစ်တာမို့….
လူ့ဘ၀ လူ့လောကကြီးထဲမှာ ဒါ့ထက်ဆိုးတဲ့ လောကဓံတွေလည်း ရှိနေတာကြောင့် …..
ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ လက်မမြှောက် အရှုံးမပေးသင့်ပါဘူး။
ပြစ်တင်ကဲံ့ရဲ့သူရှိသလို အားပေးအားမြှောက်တဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတယ် မဟုတ်လား။
ကိုယ့်အားနည်းချက် အမှားကို ထောက်ပြပေးရင် ပြင်ဆင်ဖို့ အခွင့်အရေးရတာမို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။
အကယ်၍များ တမင်သက်သက် နှောင့်ယှက်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ ပြောတာဆိုရင်တော့ လစ်လျူရှု့လိုက်ပါ။
မိုက်ကလေးကလဲ ကွယ် ..
ဒီရွာကြီးမှာ လူတွေက ထောင်ချီပြီး စာဖတ် စာရေး လုပ်နေကြတာ ..
လူ့စိတ်အမျိုးမျိုးပေါင်း တွေ့ရပေမပေါ့ … အဆင်မသင့်တဲ့ အခါမျိုးမှာ
အပြောဒဏ် အဆိုဒဏ် နဲနဲတော့ ခံရ တတ်တယ်လေ …
အပြုံးမပျက် ဆက်လက် တည်ရှိနေပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ် …။
အဲဒီရွာထဲကထွက်ပြီး ဦးကြောင်ရင်ခွင်ထဲ ပြေးဝင်လာခဲ့စမ်း မိုက်ကလေး။
မိုက်လေးရေ ဘာတွေရယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲကွယ် ဘာမှနားမလည်ရပါလား။
မိုက်လေး အနာသည်းနေတယ်ထင်ပ ရေးထားသမျှတွေပါဖျက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့။
မိုက်လေးရေးသမျှကို မန့်ပေးနေတဲ့တခြားသူငယ်ချင်းတွေကိုရောအသိအမှတ်မပြုချင်တော့တာလား ပြောပါဦး။
အယူအဆကွဲလွဲတယ်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ မိုက်လေးကအတင်းပဲထွက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်မတားပါဘူး အခုဟာကညီမလေးကငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတော့မှာနော် လို့အများသိအောင်ပြောတဲ့သူလိုဖြစ်နေတယ်ကွယ် တကယ်တမ်းဆိုရင် MG မှာလုံး၀၀င်လည်းမရေးနဲ့ မန့်လည်းမန့်တော့တာကြာသွားရင် သူ့အလိုလိုပျက်သွားမယ်ထင်တယ်ကွဲ့။
မိသားစုစိတ်ဓါတ်ဆိုတာရန်ဖြစ် ပြီးရင်ပြန်ခေါ်အဲဒါမျိုးလေးလေ။ ညီမလေးလိုခင်လို့ပြောတာနော်အစ်မပြောတာကိုစိတ်တော့မဆိုးစေချင်ဘူး။ အမှန်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါညီမလေးရယ်။ အစ်မစိတ်ရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်ရွာသူားကိုမှာထွက်မသွားစေချင်ပါဘူး။ စီနီယာတွေလည်းကူညီချင်မယ်မထင်ဘူးလေဒီလိုမျိုးကို။
ဘယ်သူဘာပြောပြော တောက်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထားလိုက်စမ်းဘာာာာာာ…..
မိုက်လေးရေ အမသဘောကတော့ မထွက်စေချင်ဘူးနော်။
စိတ်ထဲမထားပဲ ပျော်ပျော်နေပါ နော် မိုက်လေးရဲ့နောက်လာ
မိုက်ရေး.. ချစ်မိုက်ရေး.. ထွက်မသွားဘာနဲ့… ။။ ကိုရင် ခရီးထွက်နေတုန်း
မိုက်ဂလေးကို ဘီလူတွေက နှိပ်ချက်နေကြဒါလဲ။ မိုက်ဂလေး စာရေးသက်ရင့်လာရင်
တွေ့လိမ့်မယ်။ လူဆိုတာ ချီးမွမ်း ၇ ရက် ကဲ့ရဲ့ ၇ရက်တဲ့။
ကိုရင်ကြီးတို့လို နွေးထွေးပြီး အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ လူပျိုကြီးတွေရဲ့ ရင်ထဲက
မိုက်ဂလေး ရွာထဲက ရှောင်ပြေးသွားရင် ကိုရင်တော့ ဖြင့် ရန်ကုန်ပြန်ရင်
ဒီက မိုက်ဂလေးအတွက်ဆို လိုအပ်ရင် ဘွတ်အဲ… အဲ.. ပဲ… :cool: :cool:
If you go out , I will sorry.
မိုက်လေး က …. မိုက်သွေးပြ
ဂေဇတ်မှ … ထွက်မယ်ကြံ
ရွာခံတွေ … ပြန်မေးကြပါဦး
ဘဇာဟန် .. ဘာအရေးရယ်ကြောင့်
ဝေဒနာမှန် .. အံကာ ထုတ်ပါလို့ 
နှုတ်ဆက်ဖို့… အံချော် သံ
သူဂျီးရေ …. လုပ်ပါဗျ
ကျုပ်ကဗျာများ … ဘယ်သူဖတ် မှာ
ရင်မှာနာ … စာပေချစ်သူမို့ 
ထွက်ခွာရင် … သူနစ်နာမှာ စိုးတာကြောင့်
စိတ်တော်မှာ … အကြိတ်မပေါ်သင့်တာမို့ …
ကြိုက်သလို သာ …. ထင်ရစိုင်းရင်ဖြင့်
ခင်မင် ကဗျာတွေ … ဘယ်သူခံစား ပေလိမ့်
ကဲအေးရော ၀င်မိရင်(သို့)အခုဒီစာဖတ်မိရင် အချက်ငါးချက်လုံးလုပ်လို့ပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အပြစ်တင်ပါ။ဘယ်သူမှဝင်ခိုင်းမနေပါဘူး။မနေချင်ရင် go ပါ။